यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं (भिडियो सहित हेर्नुहोस्) – Nepali Taja Khabar
यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ । ” यी पुराना नेपाली नोटको मूल्य अहिले १० लाख भन्दा बढीछ यसरि बेच्नुहोस र छिनभरमै लाखौ कमाउनुहोस् पुराना नोट,सिक्का बेच्नेे तरिका तलको भिडियोमा देखाइएको छ ।
प्रहरीका यी दुई एसएसपीको जागिर धरापमा, म’रेका मान्छेको पैसा खाएको आरोप